Menaka tarehy 100% natoraly, amboarina … miaro amin’ny kentrona !
Vehivavy ahondrana any Sina : Hay ampivadiana amin'ny sinoa!
Voasambotry ny polisy ny 14 jona teo, teny Sabotsy Namehana ny vehivavy roa mpianaka izay 52 sy 34 taona. Araka ny fanadihadian’ny pôlisy dia tovovavy iraitampoho amin’ilay 34 taona no mampaniraka ity farany sy ilay reniny amin’ny fitadiavana vehivavy ahondrana
Zaza very : Araho ny marina rehetra!
Nirongatra ny zaza very tamin’ity herinandro ity, niparitaka tao anatin’ny tambajotra Facebook.
Bolida sy Julia : Mitantara ny fifankatiavany…
Isan’ireo mpivady mifanohana eo amin’ny fiainana i Lalaina na Bolida (Barea de Madagascar) sy Julia Nomenjanahary, vadiny.
Talatamaty : Tratra ilay vehivavy mpangala-jaza
Vehivavy lehibe iray no tratra niditra an-tsokosoko tao amin’ny sekoly iray teny Ambohinambo Talatamaty ny faran’ny herinandro lasa teo.
25 taona aho. Misy olona miaraka amiko, efa 6 taona, efa niteraka izahay ary 2 taona ny zanakay.
Izy efa manambady, nefa izaho sy ilay zanako mipetraka amin’ny ray aman-dreniko, fa izy zara raha manampy anay mianaka.
Lanto : “Hahavitan-doza ny hasarotam-piaro”
Anisan’ny olona diso saro-piaro raha i Lanto. Na izy aza mahatsapa fa efa tena tsy voafehy ny hasarotam-piarony. Mitantara ireo zavatra vitany noho izany hasarota-piarony izany izy.
Angela, zaza 14 taona bevohokana jiolahy
Mbola mitohy ny fikarohan’ny manam-pahefana ilay jiolahy raindahiny nahabevohoka an’i Angela Raherimalala.
Ahitana singa simika ahiana ho an’ny fahasalamana ny akora amidy vita eny an-tsena. Izany no mahatonga ny olona amin’izao fotoana mirona kokoa any amin’ireo akora natoraly sy biolojika ho an’ny hoditra.
Ity zarainay aminao ity izao dia menaka tarehy namboarina tao an-trano, 100% natoraly. Manamandina tarehy, mamelombelona hoditra, ary manala kentrona ihany koa izy ity. Mandina sady malefaka ny tarehy avy eo. Azo antoka satria, ianao ihany no nanamboatra azy.
- Menaka “amande douce” 200ml
- Tantely 1 sotro fihinana
- Faikan-tantely nokikisana tamin’ny rapy 8 sotro fihinanana
- Eau de rose 120ml
Atsonika ao anaty kaseraoly eo ambony afo ny faikan-tantely, sy ilay ranon-tantely 1 sotro, ampiarahina amin’ny menaka “amande douce”
Raha efa izay dia esorina eo ambony afo ilay kaseraoly dia avela hangatsiaka izany
Rehefa matimaty izany, dia araraho ao anatiny indray ny “eau de rose”, atao mitete tsikelikely sady kapohana amin’ny “batteuse” na “fouet” mandrapifangaron’izy ireo tsara.
Rehefa mahazo fangaro miraikidraikitra tahaka ny “crème” vao ajanona dia ampangatsiahina amin’izay.
Arotsaka sy tahirizina ao anaty “bocal” kely madio tsara. Mangatsiaka tanteraka ilay fangaro vao azo saronana.
“crème du jour” natoraly ity namboarina ity. Noho izany dia ampiasaina isa-maraina eo amin’ny tarehy efa avy nodiovina tsara. Hosorana manify, ary kobanina sy diovina amin’ny hariva. Raha mizatra manao ity fangaro ity ianao, dia ho mandina sy malefaka ny tarehinao, ho voafetra ny fipoiran’ny mony ary tsy vitan’izay fa voaaro amin’ny kentrona ihany koa.